Soo Iibso Budada Pueraria Mirifica ee Soosaarida Naasaha iyo Badhitaanka - Maraakiibta Bilaashka ah & Cashuur La'aanta | WoopShop®
Pueraria Mirifica Soosaarida budada Naasaha iyo Ballaadhinta
Pueraria Mirifica Soosaarida Budada Naaska iyo Bidaadinta - 250g gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Pueraria Mirifica Root 30: 1 Budada laga soosaaray
Waa maxay Pueraria Mirifica?
Soosaarida Pueraria Mirifica waxaa laga sameeyaa geedaha caanka ah ee loo yaqaan 'White Kwao Krua geedaha' oo ka baxa kaliya Thailand oo caan ku ah awooda naas-nuujinta dabiiciga ah.
Pueraria Mirifica, sidoo kale loo yaqaan Kwao Krua (magacyada kale), waa warshad laga helo waqooyiga iyo waqooyi-bari Thailand iyo Myanmar.
Qalalan oo budo ah, xididka tuubada ee Pueraria Mirifica wuxuu leeyahay taariikh isticmaalka gudaha Thailand.
Kansarka naasaha (ka hortagga kansarka)
Hagaajinta yareynta maqaarka iyo duuduubka
Waxay kobcisaa koritaanka timaha waxayna ka hortagtaa bidaarta.
Iska yaree miisaankaaga oo daaweeya buurnida.
Faafi oo daawee vasomotor
badarka iyo miskaha
Waxay yareysaa astaamaha qalleylka siilka.
Waxay wanaajisaa rabitaanka cuntada waxayna bogsiisaa cunno yaraanta.
Waxay dhiirrigelisaa hurdo caafimaad leh.
Nafaqo maskaxdaada oo hagaaji awooda xusuusta.
Waxay nafaqeysaa jirka waxayna nafaqeysaa dhiiga.
Waxay fududeysaa xanuunka iyo xanuunka.
Waxay ka caawisaa kor u qaadista dhaqdhaqaaqa jirka ee firfircoon.